Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Alaabada - Shiinaha Warshad Madoobaadka Shiinaha
Qaab dhismeedka FRP shaashadda maro adag
Qalabka lagu riixo pultruded waxaa lagu soo ururiyey waxyaabo la xoojiyey oo u adkeysanaya daxalka. Xadhigga FRP miisaankiisu waa khafiif, culeyskiisa gaarka ahna waa 1/4 kii bir ahaa iyo 2/3 kii aluminium.
Wareegto aan shaashadnayn oo dahaarka sare leh oo shaashadda shaashadda frp grp
Shabakadda FRP GRP leh sanding sruface / grit top. shabaggeedii xiisaynayey sidoo kale waa la karin karaa dusha. ee ku saabsan dalabka warqadda iyo daboolka.
Dheecaan ka nadiifi shaashadda birta ah ee birta leh saxanka la jeexay
Shabaggeedii bir saxan Checkered leh godad iyo gacmo isticmaalka daboolan dheecaan. Qalabku wuxuu bixiyaa birta kaarboon iyo birta aan lahayn
Shabakadda birta ah ee birta ah waxay leedahay hawsha ka-hortagga is-daba-marinta, waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii madal lagu socdo ama jaranjarooyinka jaranjarada.
Talaabooyinka jaranjarada birta ah lenght, ballaca iyo dhererka jaranjarada waa la hagaajin karaa markii la codsado. waxaana lagu dhajin karaa saxan jeeg ah.
Xinjiraha birta lagu daboolo, godka mesh mesh, nooca mesh mesh wuxuu leeyahay qaabab badan, waa lagu xiri karaa sidoo kale.
Solor Photovoltaic shabaggeedii FRP, 25mm 30mm 38mm dherer. dadka socda.
Fiberglass grp frp sharooto shabaggeedii sagxad balaastig ah oo loogu talagalay wadiiqooyinka balaastigga ah iyo marinka jaranjarada. Jaale Midab, Madoow, Cagaar, Guduud… Sharooto guddi cabbirka ugu badan 1.22 × 3.66 mitir.
Galvanized Gogosha biraha catwalk darfaha shabaggeedii steel flat
Qaybo ka sameysan Catwalk oo gogosha birta ka sameysan biraha
Waxyaabaha dhismaha kaarboonku ka sameysan yahay shabag shabag bir ah
Shabakadda birta ah ee fidsan waa shaashad mesh fudud laakiin qurux badan, rinjiyeynta daaweynta dusha sare ama galvanizing. Shabakadda noocan ah waa fududahay in la rakibo, oo leh culeys xambaarsan culeys xoog leh.